Shiistoomiyaasiisii - Wikipedia
Shiistoomiyaasiisii akassumas guuba-qaamaa cilaaluu jedhamuun kan beekamu ta'ee dhiibee maxanttuu raamoo dirirraakaanshiistoomoosomu jedhamuun kan dhuufuu. ujuummoon fincaaniiyookinmar'iimaanfaalamuu danda'uu Mallatoonii muul'aachuu danda'aan dhuukuuba garraa,,albaatii,udaan dhigaa qabuu, yookkin dhiiga fincaan keesa. Namootni dhuukuubichaan qabaman yeroo baay'ee kanquunammuu danda'uu balaa tiruu,ballaa kalee,maseenummaa,kansaari dha. Daa'iiman irrati , kan fidduu danda'uu rakkina guuddinnaafi dadhaabina barachuu dha.
Dhuukuubichii kan waliitii darbuu walquunamtii bishaan haaraamaxaantuun faalammeni. Maxantooni kuunni kan gadhisamani bishaan haarraa cilaaluun faalameeni. Dhuukuubnii kuunni kan baramaa ta'ee daa'iman biiyoolee gudachaa jiran kessa jirraatanii fi bishaan faalamee birra taphatan irattii. Balaa gudaan kan birraa kan jiraattuu qonaan bultoota,nammoota quurxuumii-qaban, fi namoota jirenya guyyaa isaanif bishaan qulquuluu kan hin fayadamaniidha. Gareen itti ramadamuudhuukuuba heelminizzii.Qooranaan kan addemsiifamuu hanqaaquu maxantuu fincaan yokkin udaan nama kesa yoo aagrameedha. Qooranoodhaan kan mirkaneefammuu danda'uu qaamoolee dhuukibicha fidankan falmatan dhiga kessa arguunnii.
Mallotnni ittissaa isaa kaneen aka akkattaa bishaan qulquuluun itti argammuu fooyesuufi lakkoofsa cilaluu hir'iisuun of kessaa qabuu. Naanoolee dhukkuubichi baay'inaan argamuu, wal'aansi paaraaziikuu'aanteliiwaggaati yerroo tokko garee hundaaf kenama. Kuunis kan goodhammu namoota dhukkuubichaan qabamaniifi, iti anuun. tamsa'ina dhukuubicha hir'isuufidha. Paaraaziikuu'aanteliin wal'ansaa Waldaan Buufaata Fayyaa aduunyaatinnamoota dhuukubichaan qabamaniif kan goorsu dha.
Wagaa 2012 irra jalqabee Shiistoomiyaasiisiin tilmaamaan gara nammoota miilliiyoona 210 addunyaa mara ira ajeeseera. Tilmaaman namotnii 12,000hanga 200,000 bara baraan dhuukkubichan du'uu Dhuukkubichi baayinaan ardiilee Afriikaa, Eshiiyyaa akkasuumas Ameeriikaa kibaati argama. Naannoo namootnii miliiyoona 700, biyolee 70tamaan caala, nanoolee dhuukuubichii barammaa ta'ee kesa jiraattuu. Biyyoolee gamoojii keesa, shiistoomiyaasiisiin dukkuba busaatiin durfameedhukkuboota maxaantootan dhuufanifi dinaagdee ira dhibbaa ciimaa gessan kessa lamaffaa irrati argama. Shiistoomiyaasiisiin dhuukuuboota gamoojii dagatamannii keesatii tareefama
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Shiistoomiyaasiisii&oldid=31680" irraa kan fudhatame